बच्चाको शारीरिक-मानसिक विकासको लागि नभुलौं यी ६ सुझाव -
VoiceNp	प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर ११, २०७७ समय: २१:४६:२१
बच्चाहरुको भविष्य र पोषणको बारेमा धेरै आमाहरु चिन्तित हुन्छन् । भविष्यमा बच्चा तीक्ष्ण बुद्धियुक्त होस् भन्ने सबै आमाहरुको सोच हुन्छ । त्यसैको लागि आमाहरूले बचपनदेखि, बदाम र ओखर खुवाउन थाल्छन् ।
तर के एउटा ओखर र बदाम खुखाउँदैमा बच्चाको मानसिक विकास द्रूत गतिमा अघि बढ्ला त ? जानकारहरु केवल यस्ता खानेकुराले मात्रै बच्चाको सर्वाङिण विकासमा सहयोग नमिल्ने बताउँछन् ।
गाजर खाँदा आँखाको दृष्टिमा वृद्धि हुन्छ ?
अक्सर हामी सुन्छौं कि गाजर खानाले आँखाको दृष्टिमा राम्रो प्रभाव पार्छ । यो सत्य हो भन्नेमा विज्ञहरू सहमत छन् । गाजरमा भिटामिन ए प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । भिटामिन ए दृष्टि वृद्धि गर्नमा धेरै उपयोगी तत्व हो । साँझमा दृष्टिमा हुने समस्यालाई गाजर खाएर कम गर्न सकिन्छ । तर केही अभिभावकहरूले ठूलो मात्रामा बच्चालाई गाजर खुवाउने गर्छन् । यो मात्रै पनि प्रभावकारी भने हुँदैन । गाजरसँगै आहारमा हरियो पातदार तरकारीहरू पनि समावेश गर्नुपर्छ, यसले दृष्टिलाई पनि असर गर्छ । यसको ख्याल राख्नुहोस् यदि बच्चाको आँखा धेरै कमजोर हुँदै गइरहेको छ भने यसलाई न्यूनीकरण गर्न खाना र पेय पदार्थमा मात्रै ध्यान दिने नभएर चिकित्सकको सल्लाहलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ ।
शाकाहारी बच्चाहरूमा प्रोटिनको आपूर्ति कम हुन्छ ?
शाकाहारी बच्चाहरूमा प्रोटिनको आपूर्ति कम हुन्छ भन्ने तर्कलाई विज्ञहरू गलत ठान्छन् । कि दाल, सिमी, सोयाबिन, पनिर आदि प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो । शाकाहारी केटाकेटीहरूले यिनीहरूबाट प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन पनि पाउन सक्छन् । खाना नखाने बच्चाहरू जस्तै, शाकाहारी केटाकेटीहरूले अन्नको माध्यमबाट पनि प्रोटिन आपूर्ति गर्न सक्छन् ।
के चिसोबाट बच्नको लागि भिटामिन सी आवश्यक छ ?
बच्चाहरूको प्रतिरोध क्षमता भिटामिन सीद्वारा वृद्धि गर्न सकिन्छ । यससँगै, प्रतिरक्षा प्रणालीले संक्रमणबाट बच्न पनि भिटामिन सी प्रभावकारी हुन्छ ।
तर चिकित्सकको सल्लाहविना भिटामिन सी सप्लिमेन्ट लिनु उचित भने हुँदैन । यसको लागि मौसमी फलफूलहरु अंगुर जस्ता आहार लिन सकिन्छ । किनकि त्यहाँ धेरै भिटामिन सी हुन्छ ।
के बदामले बच्चाहरूको मानसिक विकासलाई तीब्र बनाउँछ ?
विज्ञहरू यो तर्कलाई गलत ठान्छन् । उनीहरू यी ड्राइफ्रुट्समा हुने ओमेगा ३ फ्याट्टी एसिडहरूले मस्तिष्कको मेमोरी अंशलाई स्वस्थ राख्छ भन्ने तर्कमा भने सहमत छन् । यही कारणले नियमित बदाम खाने बच्चाहरुको दिमाग अरुको भन्दा स्वस्थ र तीक्ष्ण भने हुन्छ । यी खानेकुराले दिमागमा पर्याप्त मात्रामा पोषण दिन पनि सहयोग गर्छ ।
राम्रो विकासका लागि राम्रो निद्रा आवश्यक छ ?
२ देखि १० वर्ष उमेरका बच्चाका लागि ८ देखि ९घण्टाको निन्द्रा आवश्यक हुन्छ । यसले बच्चाको शरीरमा ऊर्जा मात्र बढाउँदैन, उनीहरूको शारीरिक वृद्धि गराउने हार्मोनको पनि विकास गराउँछ । यस्तो अवस्थामा बच्चाको शारीरिक र मानसिक विकासको लागि पर्याप्त मात्रामा निद्रा प्राप्त गर्नु महत्वपूर्ण छ । यदि यस उमेरका बच्चाहरूमा निद्राको पर्याप्तता छैन भने घरमा सबै जनाको लागि समय तालिका बनाएर निदाउने गर्नुपर्छ ।
बच्चाहरूको उचाइ बढाउन पर्याप्त दूध सेवन आवश्यक छ ?
विज्ञहरूका अनुसार क्याल्सियमको लागि दूध जस्तो राम्रो स्रोत केही पनि छैन । यसको सेवनले शारीरिक विकासमा मद्दत पु¥याउँछ । तर यसको मतलब यो होइन कि बच्चाहरूको उचाइको लागि जतिसक्दो धेरै दूध पिउनुपर्छ ।
जन्मको कम्तीमा ६ महिनासम्म नवजात शिशुलाई आमाको दूध मात्रै खुवाउनुपर्छ । त्यसपछि अन्य खानासँगै गाईको दूध पनि खुवाउन सकिन्छ ।